यसकारण नि, फ्राका से यरधनीको भबिस्य राम्रो छ.. – Ap Nepal
March 16, 2021 658
तर, मूल्य बढ्न लागेपछि बजारभन्दा बाहिर भएको सेयर पनि ब्रोकर खाता खोलेर बिक्री गर्न थालियो, जसले गर्दा बजारमा निफ्राको सेयर आपुर्ति पनि बढेको उनले बताए । अहिले सेयर बजारमा नेप्सेसँगै अरु कम्पनीको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा निफ्राको पनि मूल्य घटेको उनले बताए । “अहिले नेप्से सँगै अन्य कम्पनीको मूल्य पनि घटिरहेको छ, यस्तो बेलामा निफ्राकै मात्रै मूल्य बढ्ने हुँदैन, सेयर बजारको यात्रा (मूल्य बढ्ने कि घट्ने) माग र आपुर्तिले तय गर्छ,” उनले भने, “हाम्रो बजारमा फन्डामेन्टल हेरेर लगानी गरिँदैन ।
१५ सय रुपैयाँ मूल्य भएका कम्पनीको मूल्य पनि फन्डामेन्टलले औचित्य पुष्टि गर्दैन । २ सय रुपैयाँ सेयर मूल्य भएका कम्पनीको पनि फन्डामेन्टल हेर्दा त्यति नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ ।” १५ सय मूल्य भएको कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्दा त्यसको मूल्य ४/५ सय भन्दा बढी नहुनुपर्ने जस्तो लाग्ने उनले बताए ।
सेयर बजारमा कम्पनीको फन्डामेन्टल कम्पनीको मूल्यको औचित्य नेपाल र भारतमा पनि पुष्टी नगर्ने उनको तर्क छ । “अहिले अधिकांश देशका सेयर बजार ‘अल टाइम हाइ’ छ, जुन कम्पनीको ‘पर्फमेन्स’ले हैन बजारको अन्य कारकले हो,” उनले भने, “ अहिले ब्याजदर कम छ, तरलता पर्याप्त छ, राहत प्याकेज स्वरुप विभिन सहुलियत छन् ।” बजारमा मनि फ्लो बढी भयो भने सेयर बजार बढ्ने दाबी उनले गरे । पछिल्लो समय मनि फ्लो घट्दै गएको र ब्याजदर पनि बढ्ने संकेत देखिँदा बजार घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।
निफ्राले कहिले र कति रिर्टन दिन्छ ?
बैंकले ३–४ वर्षभित्र २ अर्ब नाफा कमाएमा १० प्रतिशत (२० अर्बको १० प्रतिशत २ अर्ब हुन्छ) रिर्टन दिन सक्छ । यदी ‘ब्यालेन्स सिट’को साइज ठुलो हुँदै गयो भने १० प्रतिशत रिटनृ पाउन २ अर्बभन्दा बढी नाफा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले एकैपटक धेरै रिटर्न दिने नभएर रिर्टन बढ्दै जाने उनले बताए । अहिले तत्कालै बैंकले दिनसक्ने रिर्टन नबढ्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडाको दाबी छ । अहिले २० अर्ब ‘युटिलाइजसन’ हुँदा बैंकले दिन सक्ने भनेको ५ प्रतिशत रिर्टन मात्रै हो ।
बैंकले पुँजी बढाएर जाने नभइ ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत जुटाउने उनले बताए । “पुँजी बढाएर २० लाई ४० बनायौं भने रिटर्न घट्छ,” उनले भने । बैंकले अहिले ५–६ प्रतिशतको रेगुलर रिर्टन दिन सक्छ तर जुन रुपमा लगानी र फन्ड जुटाउँदै व्यवसाय बढाउन सके त्यसको आधारमा रिर्टन पनि बढ्छ । खतिवडा भन्छन्, “निफ्रा दीर्घकालीन लगानी हो, यसमा हामी तत्कालै रिर्टन लिन सक्दैनौं ।” परियोजना पहिचान, परियोजनाको संरचना बनाउन र निमार्ण गर्न ५–७ वर्ष लाग्छ । तर, बैंकले जुन लगानी गर्छ त्यो पुँजीकरण हुन्छ, सेयरहोल्डरले वास्तविक रिर्टन प्राप्त केही समय लाग्छ ।
Prevनेपाली उवर चालक शुभकरलाई १ करोड संकलन गरि दिने सायन वेनिष्टर को हुन ?
Nextफेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, हेर्नुहोस यति बढ्यो लिटरमा..